Xiisado dagaal iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo ka taagan Buur-dhuubo
Xiisado dagaal iyo dhaqdhaqaaq ciidan ayaa waxaa laga dareemayaa deegaanka Buur-dhuubo ee gobolka Gedo kadib markii ciidamo Ethiopian ah ay ku dhawaadeen deegaankaasi oo ay maamulaan Al Shabaab. Xiisadaani ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii Ciidamo ka tirsan dowladda Ethiopia oo ka ambabaxay dhinaca degmada Qansax dheere ee gobolka Bay la sheegayaa inay u dhaqaaqeen dhinaca deegaanka Buurdhuubo ee Gedo oo ay gacanta ku hayaan Al Shabaab.
Wararka waxa ay sheegayaan in arintaasi ay keentay in xiisad dagaal iyo dhaqdhaqaaq ciidan laga dareemayo deegaanka Buurdhuubo kadib markii ciidamada Ethiopia ay ku dhawaadeen deegaankaasi Al Shabaabna ay bilaabeen dhankooda dhaqdhaqaaq ciidan.
Dad deegaanka ah ayaa ku waramaya in xiisadahaasi dagaal ay sababi karaan dagaalo ka dhaca deegaanka, waxaana intaasi lagu darayaa in Al Shabaab ay doonayaan inay isaga baxaan deegaanka oo ay aadaan dhinaca degmada Baardheere.
Colaada laga dareemayo Buurdhuubo waxa ay imaaneysaa, xili maalmihii u dambeeyay magaalada Garbahaareey ay ka soconayeen shirar ay yeelanayeen Saraakiisha dowladda iyo kuwa Itoobiya oo looga hadlayay sidii Al Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Gedo. Xaafiiska Wararka Warlalis.com